မှန်များအဘယ်ကြောင့် fuck ဆိုတဲ့မျက်နှာစာ • Apricots®
မှန်များအဘယ်ကြောင့် fuck ဆိုတဲ့မျက်နှာစာ
ငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကောင်လေးတစ်ဦးမှန်မတိုင်မီ fucked နှင့်ပုံ, အစဉ်အဆက်အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ဖူး။
ငါ့မိသားစုထဲမှာအကြှနျုပျတို့လိင်၏ကြီးမားသောပရိတ်သတ်များများမှာကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးလိင်ဆိုင်တူ, သင်အသက်တာ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအပျော်အပါး၏တဦးတည်းခံစားရန်အရာအားလုံးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါ့အိမျ၌ကြှနျုပျတို့အမွဲအလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးများကိုသွတ်သွင်းပေးခဲ့ကြတယ်ပြီ, ငါသူတို့ငါတို့ကိုအပ်ထားသောပညာရေး, ငါ့အစ်ကိုငါ့ကိုနှစ်ဦးစလုံးဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထိုအခါငါကျောင်းနှစ်များတွင်လက်တွေ့ nil ကြောင့်ကျွန်မရဲ့မိဘတွေဆိုမညီကြောင်းမရှိဘဲအိမ်မှာကိုလိင်ပညာရေးဆုံးမသွန်သင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ငါသည်ဤဆိုကြသနည်း ငါ fucked ကောင်လေးနည်းနည်းရှက်ကြီးနဲ့ကျွန်မအိပ်ရာမှာသူ့ကိုအရာအခြို့သင်ပေးခဲ့လို့ပဲ။ တကယ်တော့ငါ fuck ဆိုတဲ့မှညစ်ပေသောအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့ကိုချစ်။ သူတို့ကပိုကောင်း, ပိုအောက်တန်းလိင်ပြောတယ်ပြီးတာနဲ့။ ဘယ်လိုညာဘက်! တကယ်တော့ငါလမ်းပေါ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အိပ်ရာများတွင်တစ်ဦးပြည်တန်ဆာဖြစ်၏။ အိမ်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုသူလိုလားသောအရာကိုပါဘူး။
ငါစဉ်အတွင်းငါ့အပစ်ကပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Mobile World Congress တွင် ယူပွီးလြှငျ ပု ဖို့သတိထားပစ်ခြင်းငှါအခွင့်အလမ်း ဟာ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေအတွက်လေတိုက် '' တစ်ဦးတူရာအိပ်ခန်း, တစ်ဦး whorehouse အတွက်အခန်းတစ်ခန်း ။ အခန်းထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဘို့အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိပ်ရာကျော်တစ်စပျစ်သီးကိုပုံစံမျိုးနှင့်3ကြေးမုံ, တခြမ်း, တဦးတည်းမျက်နှာစာများနှင့်ခေါင်မိုးပေါ်တမူထူးခြားတဲ့နှင့် unrepeatable ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကြေးမုံရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ငါ့ခမည်းတော်သည်မှန်ရှေ့တွင်လိင်ဆက်ဆံဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ paraphilia katopronofilia ထံမှကြုံတွေ့နေကြရသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေခြင်းသို့မဟုတ်မှန်ရှေ့တွင် fuck ဆိုတဲ့အမှနျတရား, ဤကိစ္စတွင်3အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအကောင်းဆုံးကြိုက်တယ်အရာတစျခုအကောင်း, ထိုးဖောက်မှု၏လှုပ်ရှားမှုများကို reciprocating စဉ်အတွင်းမှန်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်, ငါကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ကနေကြည့်ရှုလို့ကိုယ့်ကိုစို့သောအခါ, အကြှနျုပျ၏ပစ်ကပ်ထင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးမှန်ရှေ့တွင်လိင်ရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသလား သငျသညျအစဉျအမွဲကြိုးစားခဲ့သလား? မှန်ရှေ့တွင်ရှိခြင်းလိင်စူပါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အသက်တာ၌တစ်ဦးမှန်ရှေ့တွင် fuck ဆိုတဲ့ရန်ရှိသည်သလဲ?
အခါသမယတွင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအသက်တာ၌သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုရှာဖွေနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မအရာအားလုံးကိုကြိုးစားရန်ရှိသည်ပြောတယ်။ တူညီတဲ့အစဉ်အဆက်ကိုထင်ဟပ်ပြသမှုများ၏ရှေ့မှောက်၌ fuck ဆိုတဲ့မယ်ဆိုရင်သင် excites လျှင်သိဘယ်တော့မှမ, လိင်နှင့်အတူတွေ့ကြုံတတ်၏။
သငျသညျလိုပါက မှ သရုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်မင်းသမီး porn ခံစားရတယ်
သင်နှင့်folláisမထိနေချိန်မှာသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဖက်ခံစားတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သငျသညျ action ကိုရောက်နေတဲ့အခါ, တခါတရံတွင်သင်သည်ဤအမှု၌အလွန်ကြီးစွာသောဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင်ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ကနေမြင်နိုင်ပါသည်ကြောင့်အမြင်အာရုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံး။
သငျသညျနည်းနည်း narcissistic ဆိုရင်
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးသင်ကိုယ်တိုင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ fucking, ဒါမှမဟုတ်ပင် masturbating စဉ်ကိုမြင်လျှင်တွေ့မြင် excites ။ သငျသညျခရစျယာဘေးလ်အားဖြင့်ကစားသည့်ဇာတ်ကောင်သည့်အတွက်ရုပ်ရှင် "အမေရိကန် Psycho" ကနေအိပ်ခန်းမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်ရပါတယ် အကယ်. နှစ်ခုဟွတ်နှင့်အတူလိင် , သငျသညျငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့အရာကိုသိပါလိမ့်မယ်လျှင်မရ, ဒီမှာငါပျော်မွေ့ဖို့မြင်ကွင်းတစ်ခုထားခဲ့ပါ က ။
သငျသညျလိုလျှင် ရန် အတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုချိုးဖျက်
အသစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပိုပြီးပျော်မွေ့ပါစေနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကနေလွတ်မည်ဟုမိတ်ဆက်ပေး။ တခါတရံနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်အားထက်သန်မှုကချွတ်, ဒါကြောင့်အရေးကြီးသည် မှ ကြည့်ရှု ဘို့ ဖြေရှင်းချက်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်, စိတ်ကူးယဉ်ဝေမျှနှင့်စူးစမ်း ။
သငျသညျလိုပါက မှ မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေကိုကြည့်ပါ
အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက် မှ , သင်၏မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဖတ်, သင့်မျက်နှာအပျြောအပါးကိုစောငျ့ရှောကျပေမယ့်အချို့ရှိပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူး ကျွန်တော် ပါလိမ့်မယ် ဥပမာ, ရာထူးခွေးကလေးကိုခွင့်ပြုသို့မဟုတ် cowgirl reverse မဟုတ်ပါဘူး။ အခန်းထဲမှာအချို့ကြေးမုံရှိပါကသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသို့မဟုတ် cum fuck ဆိုတဲ့အနေဖြင့်မည်သို့ပင်ဆို, ငါတို့သည်သင်တို့၏ပျော်ရွှင်မျက်နှာမြင်နိုင်ပါသည်။
အချို့လူများကမှန်ရှေ့တွင်မသက်မသာခံစားရပေမည်, ဒါမှမဟုတ်ပင်အတူတူပင်မှန်သူတို့ကိုအာရုံနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကသငျသညျယုံကြည်မှုရဖို့နှငျ့သငျအကြီးအပျြောအပါးကိုတွေ့ကြုံခံစားရပျရပျထဲမှာ "sexy" စွမ်းဆောင်ရည်ထားအဖြစ်သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှာဖွေစူးစမ်းအကြောင်းပိုမိုယုံကြည်မှုခံစားရကူညီဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပေးနိုင်ပါတယ် သင် ကိုယ်သင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်
ဒါဟာ တစ်ဦးမှန်ကိုသုံးလညျးအရေးကွီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားဖြစ်ပါသည် သင် masturbate ဘယ်လိုကြည့်ပါ ကပျော်မွေ့ရန်, sexy နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအကြောင်းကို, ပို. ပင်, သင်ယူခြင်းနှင့် သိ. တစ်လမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်မှန်ရှေ့တွင်အတွက်အိပ်ရာပေါ်မှာအဝတ်အချည်းစည်းမုသာစကားကိုနှင့် (မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ခရီးဆောင်အပေါ်) မှာ porno ကဗီဒီယို masturbating အောက်ပါမြင်ကွင်းတစ်ခုဆိုပါစို့။ သငျသညျအစဉျအမွဲ, rascal ပြုသောအမှုဖွင့်တာသေချာပါ!
ကျနော်တို့အခန်းတခန်းထဲမှာကြေးမုံပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပေမယ့်တစ်ဦးအိမျတျော၌သင်တို့သည်လည်းသူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ fuck ဆိုတဲ့နိုင်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောရေချိုးခန်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့ပိုပြီးမှန်, အဲဒီမှာဖြစ်နိုင်သည်။ ငါကိုချစ် ဖို့ မတ်တပ်ရပ် များတွင် စဉ်မှန်ရေချိုးခန်းစုပ်ရှေ့မှာ ငါထိတွေ့ဆက်ဆံ အတွက် စအိုလိင်ဆက်ဆံ ။ ငါရေချိုးခန်းနှင့်နောက်လာမည့်ရှိသည်အဖြစ်ထို့နောက် ကျွန်တော် အဆုံးသတ် တက် သည့်ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ fuck ဆိုတဲ့ ။ သင်အမြဲအနီးအနားမှာရေချိုးခန်းရှိသည်ကြောင့်တကယ်ပဲအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်ဟိုတယ်အတွက် fucking တစ်ခုအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Mirrors ကတော့ဥပမာ, ကျွန်တော်တို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ကျယ်ပြန့ပူဇော် ပဏာမကာလအတွင်း ကျွန်မကိုချစ် ရန် ရွေ့လျားမတိုင်မီကျွန်မအဖော်တစ်ဦးတထောင်ထားရန် striptease ကခုန်ပြု အပေါ် ကြမ်းတမ်းလိင်ငှါ၎င်း, အတွင်း မှန်လုပ်နိုင်တဲ့ရှေ့တွင် ငါ့ကိုမှာမတူညီတဲ့ထောင့်ကနေ။
သင်တစ်ဦးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာလိင်ဆက်ဆံငြီးငွေ့နေနှင့်လိုပါက မှ လိင်တွေ့ကြုံခံစား အတွက် အများအပြားမှန်ရှေ့တွင်ပေမယ့်အိမ်မှာ သငျသညျ ရှေးခယျြမှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, မစိုးရိမ်, အ apricot ၌နေသောငါ၏အဆွေ၏အခန်းပေါင်း ရှိ တစ်ဦး တွေအများကြီး ၏ ကြေးမုံနှင့်ပင်ဖျောပွနိုငျ သငျသညျ အဘယျ fuck ဆိုတဲ့နှင့် ပို. ပင်ကခံစားရန်အကောင်းဆုံးရာထူး။